कस्तो देखियो जसिता र धिरजको जोडी ? « Mazzako Online
कस्तो देखियो जसिता र धिरजको जोडी ?
पूर्व प्रेमी प्रेमिका अभिनेता धिरज मगर र अभिनेत्री जसिता गुरुङ अब एउटै फिल्ममा खेल्दैछन् । इन्टु मिन्टु लण्डनमाको निर्देशक रेनशा वान्तवा राइले निर्देशन गर्न लागेको आई एम ट्वान्टी वान फिल्ममा यी दुई कलाकारले काम गर्दैछन् ।
धिरज र जसिता फिल्ममा पक्का भएपनि मिडियामा भने आएका थिएनन् । तर, बिहिबार वान सिनेमाज्को उद्घाटन गर्न यी दुई कलाकार पुगेका थिए । जसमा धिरज र जसिता नजिक देखिए । उनीहरु, हात नै समाएर कार्यक्रममा पुगेका थिए ।
धिरज र जसिताको जोडी आकर्षक देखिएको थियो । यो जोडी कुनै पनि समय छुट्टिएन । रेनशा वान्तवा राइको फिल्ममा एकसाथ काम गर्न पाउँदा धिरज र जसिता उत्साहित पनि देखिएका थिए । फिल्मको छायांकन तिहारपछि सुरु हुनेछ ।